IMIGAQO YEVANDERPUMP 'UKATIE MALONEY KWIINGCEBISO ZAKHE ZOBUHLE BOMTSHATO: EKHETHEKILEYO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Imithetho yeVanderpump 'uKatie Maloney-Schwartz usinika ezona Ngcebiso zaBuhle boMfazi oNgcono
Imithetho yeVanderpump 'uKatie Maloney-Schwartz usinika ezona Ngcebiso zaBuhle boMfazi oNgcono
(Ifoto ngu: Brian Baer / Bravo)
Ngu: Sophie Ross 12/05/2017 ngo-4: 00 PM
Uye wakhamisa kwaye wazihlisela indlela yakhe ezantsi (kumabonakude, hayi ngaphantsi), kwaye ngoku usinika ezona mfihlo zakhe zintle. Katie Maloney IBravo ’ Imigaqo yeVanderpump Utshatile uTom Schwartz ngaphezulu konyaka ophelileyo, kodwa ukwakheka komfazi wakhe, ukhathalelo lolusu kunye neengcebiso zeenwele zisasebenza ngokufana nangaphambili. Inkqubo ye- blogger kunye nobuhle aficionado, ngoku okwisizini yesithandathu ye-Bravo franchise, ubamba i-Lizapourunemerenbleus ukuze abelane naye malunga nokwazi iingcebiso zobuhle zosuku lomtshato.
Ukutshintsha kwegama emva kokutshekishwa komtshato
IHydrate, iHydrate, iHydrate
Ngokweengcebiso zokhathalelo lolusu ezikhokelela emtshatweni, uMaloney ucebisa into enye ngaphezu kwayo yonke into: amanzi. Ukuba andifakwanga manzi, indawo yokuqala ayibonisayo kulusu lwam, utshilo. Yindlela elula yokufumana umbala okhanyayo ngexesha lomtshato wakho, ukongeza ekuhlanjululweni kokukhanya, ukususwa kobuso ebusuku (duh) kunye nokukhupha.
Kwaye ukuba ukhetha ukufumana ubuso phambi kokuhamba ezantsi, zinike ixesha elikhokelayo leveki xa kunokwenzeka ukuba libangele ukuqhekeka, uyacebisa.
Hlala Kwinto Oyaziyo
Oku kufanele ukuba kwenzeke ngaphandle kokuthetha, kodwa awuyi kufuna ukwenza nantoni na ephambeneyo okanye ngaphandle kwesiqhelo ngeenwele zakho kanye ngaphambi komtshato wakho. Endaweni yoko, bambelela kwisitayile owaziyo ukuba siyakusebenzela. Okona kuninzi, fumana itrimu yokugcina izinto zintsha, kodwa iiveki ngaphambi komtshato wakho ayiloxesha lokuzama ii-bangs, utshilo.
Cinga ngesinxibo sakho, indawo kunye nesitayile
Inkqubo ye- IPucker kunye nePout Umsunguli ugxininisa ukuba kutheni iinwele zosuku lomtshato zingafanelekanga ukuba ziqwalaselwe emva kwexesha. Kuya kufuneka uyithathele ingqalelo kulwalamano lwentamo yesinxibo sakho, indawo omi kuyo umtshato wakho, kunye nexesha losuku — umzekelo, ngaba uyafuna ngenene ii-curls ezinzima ngexesha lomsitho ongaphandle wama-95?
Kwaye ngeli xesha ujonge umtshato wakho kufuneka uhlale ubonakalisa eyakho isitayile, ngokuqinisekileyo uvunyelwe ukuba uthathele ingqalelo into oyaziyo ukuba iqabane lakho linokufuna ukubona. UTom uyazithanda iinwele zam phezulu nasemva, ke loo nto yayiyinto ethatha isigqibo kum, itsho inkwenkwezi yokwenyani.
Ngokwenziwa kwemini yosuku lomtshato, ukuyigcina ikhanya kwaye intsha ligama lomdlalo. Ufuna ukubonakala njengohlobo oluhlaziyiweyo lwakho, utshilo. Ufuna ukuyigcina iyindalo, intle kwaye inengxabano simahla. Ngamanye amagama, cinga kabini malunga nemidlalo iliso elinzima elinomsi kunye ne-lipstick ukuba ayiyonxalenye yerejimeni yakho yobuhle eqhelekileyo.
I-Makeup ye-Long-Wear ibalulekile
Nokuba ukhetha umculi wezinto zokuhombisa okanye hayi, izithambiso zokunxiba ezinde zibaluleke kakhulu. Uyinxibile imini yonke kwaye udanisa ubusuku bonke. Lixesha elide! Kutsho uMaloney. Ayinguye wonke umntu odinga igcisa lokuzenzela-yinkcitho eyongezelelweyo- kodwa tyala imali kwizithambiso zokunxiba ezinde ukuba uthatha isigqibo sokwenza ngokwakho.
Nangona ecebisa ngokugubungela ngokupheleleyo, ukuzenzela okungapheliyo kwemitshato ezaliswe ngumdaniso, uMaloney uthi uyigcina ilula (kwaye uyazi ukuba yintoni esebenzayo ngokuzibukela iminyaka kumabonwakude) ngobusuku bokuthandana nohubby uTom Schwartz namhlanje: I-eyeliner enamaphiko kunye nomlomo obomvu. Kuvakala ngathi kugqibelele umhla wobusuku jonga kuthi.
usuku olumnandi kwisibini esihle
indlela yokubopha isaphetha ngebhanti enentambo
Ingoma yomtshakazi yokuhamba ezantsi
izipho ezilungileyo kubazali